Ukuqanjwa kweMfazwe ebandayo #1
Ukuqanjwa kweMfazwe ebandayo #2
Ukuqanjwa kweMfazwe ebandayo #3
Ukuqanjwa kweMfazwe ebandayo #4
Ukuqanjwa kweMfazwe ebandayo #5
Ukuqanjwa kweMfazwe ebandayo #6
Amagqabantshintshi eMfazwe ebandayo
Amaxwebhu eMfazwe ebandayo
Imibuzo ebandayo yoMlo obandayo
Ababhali bembali yomlo obandayo
Ukubhala imbali yomlo obandayo
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-imisitho ye-1945 ukuya kwi-1950
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-imisitho ye-1950 ukuya kwi-1959
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-imisitho 1960-1979
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-imisitho ye-1980 ukuya kwi-1991
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-amaqela
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe-ebandayo-iinkokheli
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-imixholo kunye neengcinga (I)
Imibuzo yememori ebandayo yeMfazwe ebandayo-imixholo kunye neengcinga (II)
Kwimemori ebandayo yeMfazwe ebandayo
Imiboniso bhanyabhanya yomlo obandayo kunye nomabonwakude
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #1
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #2
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #3
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #4
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #5
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #6
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #7
Imibuzo ebandayo yomlo obandayo #8
Izicatshulwa zoMlo obandayo
Izihloko zemfazwe ezibandayo
Imfazwe ebandayo ngubani
Isigama samagama emfazwe ebandayo - iingqondo
Isigama seMfazwe ebandayo - iziganeko
Isigama seMozulu ebandayo - abantu
Isigama seMozulu ebandayo-iindawo
Imfazwe ebandayo Ixesha elide lokuxinana kwamazwe kunye nokujongana phakathi kwe1945 kunye ne1991. Yayiphawuleka imbambano enkulu phakathi kweMelika, iSoviet Union kunye nabalingane bayo.
Ibinzana elithi 'umlo obandayo' laqanjwa ngumbhali uGeorge Orwell, owathi ngo-Okthobha u-1945 waxela kwangaphambili ixesha “lozinzo eyoyikekayo” apho amazwe anamandla okanye ii-blocs zomanyano, nganye inakho ukutshabalalisa enye, iyala ukunxibelelana okanye ukuxoxa.
Ukuxelwa kwangaphambili kuka-Orwell kwaqala ukubonakala kwi-1945. Njengoko iYurophu yayikhululwe kwingcinezelo yamaNazi, yathinjwa yiSoviet Red Army empuma kunye nabaseMelika kunye neBritish ngasentshona. Kwiingqungquthela zokutshatisa ikamva lasemva kwemfazwe yaseYurophu, kwavela ukungavisisani phakathi kwenkokeli yeSoviet UJoseph Stalin kunye namahlakani akhe aseMelika naseBritane.
Nge-1945 ephakathi, amathemba obambiswano lwasemva kwemfazwe phakathi kweSoviet Union kunye namazwe aseNtshona sele alahliwe. Kwimpuma Yurophu, iiarhente zaseSoviet zanyanzela amaqela ezentlalo ukuba anike amandla, okonyusa ipolitiki yaseBritane Winston Churchill ukulumkisa malungaIphepha lesinyithi”Ukuhla kweYurophu. I-United States yaphendula ngokuphumeza Icebo likaMarshall, iphakheji yeminyaka emine yezigidi zeedola i-13 yezigidi zokubuyisela oorhulumente kunye noqoqosho lwaseYurophu. Ngasekupheleni kwe-1940s, ukungenelela kweSoviet kunye noncedo lwaseNtshona lwahlulahlula iYurophu kwiibhloko ezimbini.
Imephu ebonisa ukwahlula kweYurophu ngexesha leMfazwe ebandayo
Kwindawo yeli candelo bekukho emva kwemfazwe Germany, ngoku inamathelwe yathambeka kabini kwaye idolophu enkulu iBerlin ihlalwa ngamagunya amane.
Kwi-1948, amaSoviet naseMpuma Jamani azama yindlala amandla aseNtshona aphuma eBerlin bathintelwa ngeyona moya inkulu kakhulu embalini. Kwi-1961 urhulumente we KwiMpuma Jamani, ejongene ne Ukuphuma kobuninzi babantu bayo, wavala imida yakhe kwaye wamisa umqobo ongaphakathi kwisixeko esahlulekileyo saseBerlin. I Udonga lwaseBerlin, njengoko yaziwa njalo, yaba luphawu oluqinisekileyo lweMfazwe ebandayo.
Imfazwe ebandayo isasazekile nakwimida yaseYurophu. Ngo-Okthobha u-1949, uVukelo lwaseTshayina lwafikelela kwisigqibo ngokuphumelela kukaMao Zedong kunye neQela lamaKomanisi laseTshayina. I-China yakhawuleza yaqhuba amashishini yaba ligunya lenyukliya, ngelixa isoyikiso yobukomanisi yashukumisela ukubonwa kweMfazwe ngokuBandayo e-Asiya. Kwi-1962, ukufunyanwa kwe Iifosholo zaseSoviet kwisizwe saseCuba yanyanzela i-United States kunye neSoviet Union kwisaqhwithi semfazwe yenyukliya.
Ezi ziganeko zavuselela amanqanaba angazange abonwe ngaphambili okurhanelwa, ukungathembani, iparanoia kunye nemfihlo. Iiarhente ezinje nge-Int Intelligence Agency (CIA) kunye Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) yonyuse yabo imisebenzi yokufihla kwihlabathi liphela, ukuqokelela ulwazi malunga namazwe otshaba kunye noorhulumente. Bangenelela nakwipolitiki yezinye izizwe, bekhuthaza kwaye bebonelela ngentshukumo phantsi komhlaba, imvukelo, coup d'etats kunye neemfazwe zommeli.
Abantu abaqhelekileyo bahlangabezana noMlo obandayo ngexesha langempela, ngokusebenzisa eyona ibanzi Iphulo lokusasaza kwimbali yoluntu. Amaxabiso eMfazwe ebandayo kunye neparanoia yenyukliya yangena kuwo onke amabakala enkcubeko, kubandakanya ifilimu, umabonwakude kwaye umculo.
IWebhusayithi ye-Cold War kwi-Cold War isisixhobo esibanzi somgangatho wesifundo sokufunda kwezopolitiko nakwezomkhosi phakathi kwe1945 kunye ne1991. Inengqokelela yemithombo eyahlukeneyo ye-400 eyahlukileyo kunye yesibini, kubandakanya neenkcukacha izihloko ezizihloko, amaxwebhu, amaxesha abekiweyo, Iglosari kwaye Imbali yamabali. Abafundi abafundileyo banokufumana ulwazi malunga neMfazwe ebandayo imbali kwaye ngembali. Abafundi banako ukuvavanya ulwazi lwabo kwaye bakhumbule ngothotho lwezinto ezenziwa kwi-Intanethi, kubandakanya Imibuzo, amagama anqamlezayo kwaye ukujonga amagama. Imithombo ephambili eceleni, konke okuqulathwe yiAlfa Imbali kubhalwa ngootitshala abanolwazi nabanamava, ababhali kunye nababhali bembali.
Le ndawo ye-Cold War iqulethe amanqaku, imithombo kunye nembono yeziganeko zehlabathi kunye noxinzelelo phakathi kwe1945 kunye ne-1991. Indawo yenziwa ngeAlfaum kwaye inamagama e-308,862 kumaphepha e-405. Ngolwazi oluthe kratya, tyelelo lwethu Ikhasi le FAQ or Imigaqo yokuSebenzisa.